आउनुस् बजाऔँ ताली ! – हिमालयन ट्रिबुन
आउनुस् बजाऔँ ताली !
-त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै ईश्वर पोखरेलको अगुवाइमा सेनालाई खरिदको जिम्मा दिने अर्को निर्णय भयो । ओम्नीमा समेत पोखरेलकै आफन्तको संलग्नता थियो भन्ने पढ़िएको थियो ।
-ओम्नीसँग किन्दा ३९ रुपियाँ प्रतिगोटा परेको सर्जिकल मास्क विभागले प्रतिष्पर्धाबाट किन्दा जम्मा १५ रुपियाँ पर्यो । ओम्नीसँग २ डलरमा किनिएको ‘शु-कवर’लाई विभागले किन्दा त्यो मूल्यमा ६ वटाभन्दा बढ़ी आयो । सबैभन्दा बढ़ी मूल्य तिरिएको आइटम यही थियो । ४१ रुपियाँमा सरकारी निकायले नै किन्न सक्ने सामानलाई ओम्नीमार्फ़त २४४ रुपियाँ हालिएको रहेछ ।
-अहिले फेरि यिनै खरिददारहरूको तलबभत्ताका लागि राजश्वले नपुग्ने भएछ । आन्तरिक र वैदेशिक ऋण उठाउनतिर सरकार लागेको छ भन्ने सुनियो ।
आउनुस्, यस्तो वैश्विक सङ्कटको समयमा पनि यस्तो कलात्मक खेलका लागि ताली बजाऔँ ।